Tag: Xukun | Sagal Radio Services
Maxkamadda Hargeysa oo boqor Raabbi Axmed Cabdilaahi 2 sano xarig ah ku xukuntay
Sagal Radio Services • News Report • March 21, 2013
Maxkamadda Hargeysa, ayaa maanta laba sano oo xarig ah ku xukuntay boqor Raabi Axmed Cabdillaahi, oo ka mid ah cuqaasha deegaannada Somaliland.
Rag lagu eedeyay inay Shabaab yihiin oo Puntland ay dil ku xukuntay
Maxkamadda darajada koowaad ee Boosaaso ee ciidamada qalabka sida Puntland, ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay seddex ruux oo lagu eedeyay inay Shabaab ka mid yihiin.
Muqdisho oo eedeysanayaal lagu xakumay
Maxkamadda gobolka Banaadir, ayaa maanta xukun ku ridday 7 ruux oo lagu eedeeyay dambiyo uu ka mid yihiin is laheysiin hanta dadow.
QM oo dalbatay in dib loo furo kiiskii wariye Koronto iyo haweeneydii sheegatay in la kufsaday
Sagal Radio Services • News Report • February 7, 2013
QM, ayaa ka dalbatay dowladda Soomaaliya in dib loo furo kiiska wariye C/casiis C/nuur Koronto iyo haweeney la sheegay in la kufsaday oo maxkamadda gobolka Banaadir dhawaan ku ridday xukun hal sano ah, kadib markii lagu eedeeyay inay dhacdadaasi kufsiga ka been sheegeen wariyaha iyo gabadha.
Shabaab oo sheegtay inay xukun dil ah ku rideen Denis Allex
Sagal Radio Services • News Report • January 16, 2013
Kooxda al-Shabaab, ayaa ku gooddisay inay dili doonaan Denis Allex, oo ay sheegeen inay ku rideen xukun ah dil.
Maxkamadda ciidamada oo xukun xabsi daa'in uu ka mid yahay ku ridday askar burcadnimo lagu helay
Maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ku ridday xukunno kala duwan oo xabsi ah, kaddib markii lasoo qabtay iyagoo dhac ka geysanaya deegaanno gobolka Shabeellada hoose ka tirsan.